JCUT CNC router fahalalana fahalalana fikolokoloana
Ny olana nentin-drazana dia:
1. Milina fanoratana izay tsy mbola nitazona: ny lalamby mpitatitra lalana dia voatsimbadika mafy, miadana ny hafainganam-pandeha, miadana ny vokatr'asa, tsy tsara ny vokatr'asa, mahantra ny fiainana masinina, ny Z axis dia miraikitra, ny hadisoana diagonaly dia lehibe, ary ny zoro mifantina dia tsy tsara! Lesoka ilay fiara vaventy ary ny diso manaraka dia lehibe loatra! Ny fahasimbana mihena, tsy fahombiazan'ny mekanika toy ny fipoahan'ny slider!
2. Milina fanoratana miaraka amin'ny menaka tsy mety: ampiasao ny menaka, menaka, menaka manjaitra ary menaka hafa. Ny fahitana mofomamy dia lehibe loatra, izay tsy mahasoa ny milina. Ny fahitana ny menaka fanjaitra dia kely loatra ary tsy manimba ny astringent. Ny tena mahazatra dia ny fampiasana ny menaka môtô, izay hamokatra vovoka miorim-bolo sy adsorb.
3. Fampiasana solika maharitra mandritra ny fotoana maharitra. Hisy ny soson-doko mavokely mavo eo amin'ny fanambanin'ny lalamby. Ho hitanao fa ny elanelana amin'ny fantsom-bolan'ny milina dia mihamaingotra sy fohy kokoa, ary mihamalalaka ny fitakiana.
Vahaolana, ampiasao menaka lubricating manokana misy ny teknolojia graphene
1. Manala solika ny menaka mikororosy Mavesatra sy mandrama haingana ny sludge vokarina amin'ny menaka toy ny menaka menaka
2. Fampidiran-tsofina mahomby mametaka ny lalamby mpitari-dàlana, solomaso, tsorakazo mihidy, tariby renin-tsosana, fonosana, akora, làlan-tsofina ary singa hafa amin'ny milina sokitra.
3. Fiarovana bebe kokoa Ny teknolojia famotsorana tsy manam-paharoa dia miaro amin'ny alàlan'ny metaly ary manitatra ny fiainam-panompoana 4. Safidy kokoa Ny lanjan'ny PH dia tsy miandany ary tsy ahitana singa na asidra-alkali, tsy manala ny mpitari-dalana, ary tsy manimba ny vatan'olombelona!
1. Ho an'ny milina vaovao natao voalohany: ampio mivantana ny menaka lubricating manokana ao anaty vilan'ny menaka, fa tsy mihoatra ny roa ampahatelon'ny fahalemen-tsolika, mba hisorohana ny tsindry mavesatra. Na ampiasao ny manondraka na manosihosy isan-kerinandro mba hampihatra izany amin'ny ampahany amin'ny fitaovana. Indray mandeha na herinandro iray volana.
2. Ho an'ny fitaovana taloha dia asaina manadio ireo faritra ireo alohan'ny hampiasana azy!